कुनै समय अरुको घरमा काम गर्ने देखि बालुवा बोक्न समेत् बाध्य भएकी बसुमाया यसरी बनिन् एकाएक करोडपती - Samachar PatiSamachar Pati
कुनै समय अरुको घरमा काम गर्ने देखि बालुवा बोक्न समेत् बाध्य भएकी बसुमाया यसरी बनिन् एकाएक करोडपती
२७ पौष । बसुमाया तामाङ अचारदिदी नामबाट प्रख्यात छिन्। उनको यो उपनाम विगत ८ वर्ष देखिको निरन्तर अचार उद्योगमा लागि परेर पाएकी हुन्। उनको अचार अहिले देश देखि विदेशसम्म विक्री हुने गर्छ। काठमाडौँको मनमैजुमा अवस्थित ‘नेपाली मन उद्योग ‘की उनी संचालिका हुन्। अहिले नेपाली मन उद्योगको चर्चा सर्वत्र रहेको छ। यस उद्योगमा अर्ग्यानिक विभिन्न थरीका अचार पाइन्छन। जस्तै स-टिमुरको अचार, चिकेन अचार, बफ अचार, माछाको अचार आदि रहेको छ। हातैद्वारा तयार पारिएको यी अचारहरु ससाना मार्ट देखि ठुला ठुला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरुबाट खरिद गर्न सकिन्छ।
यसरी काम गर्ने क्रममा मैले ठेलागाडा राखेर सडकमा मःम, चप, सेकुवा, ससेज आलुफ्राई पनि बेचेँ । मःम र ससेजसँग दिएको टिमुरको अचार ग्राहकहरुले निकै रुचाए ।, ‘उनले थपिन। घरको आँगनबाट शुरु गरेको व्यवसायले उनलाई व्यवसायिक हुन सिकायो । यसैबाट कमाएर करिब चार लाख जम्मा पारी उद्योगमा लगानी गरेकी छिन् भने आजको दिनमा उनले अचार उद्योगमा १४ जनासम्मले रोजगारी दिएकी छिन्। अहिले उनी करोडपतिको गिन्तीमा नाम राख्न सफल बनेकी छिन्। उनी सबैका लागि एक उदारणीय महिला बनेकी छिन्। हेर्नुहोस भिडियो स्
चलचित्र ‘आप्पा’को गीत सार्वजनिक
जन्मेको २४ महिनाबाटै दैनिक ४० चुरोट पिउने बालक अहिले के गर्दै होलान !! हेर्नुहोस !
फिल्म ‘नाई नभन्नु ल ५’को ट्रेलर सार्वजनिक